UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2: ama-WM amanye ama-5 weLinux | Kusuka kuLinux
Namuhla siyaqhubeka nesethu iposi lesishiyagalolunye nepenultimate ku- Abaphathi bamawindi (Abaphathi beWindows - WM, ngesiNgisi), lapho sizobuyekeza khona okulandelayo 5, kusuka ohlwini lwethu lwe 50 okuxoxwe ngaphambilini.
I-Steamcompmgr, iStumpWM, iShukela, iSwayWM ne-TWM
“I-WM entsha enethemba lokuba yi-GUI ephelele ngokuzayo, yingakho ibizwa manje I-Unix Desktop Environment Project (UDE). Iphrojekthi ayisebenzisi noma yimiphi imitapo yolwazi ekhethekile efana ne-QT noma i-GTK +. Isebenzisa kuphela indinganiso ye-Xlibs, ukuyigcina ishesha, ilula futhi ivikele ukuncika. I-UltimateWM noma i-UDE ine-Look'n'Feel yasekuqaleni, akuyona nje enye ikhophi yesikhombimsebenzisi somsebenzisi sokuphathwa kwewindi esaziwa kakhulu "sakudala".".
Iphrojekthi engasebenzi: Umsebenzi wokugcina utholwe cishe eminyakeni eyisithupha edlule.
Inikeze ukusetshenziswa okuphezulu kwesikhala sesikrini, ukuzinza, nokusetshenziswa kwemithombo ephansi kakhulu.
Yenzelwe ukuthi isetshenziswe kahle kakhulu ngemuva kwesigaba sokufunda esifushane.
Ibingenayo ibha yomsebenzi noma iphaneli yedeskithophu noma okulinganayo. Futhi amafasitela ayengenayo ibha yesihloko ngakho-ke ayengenazo izinkinobho zokuvala, ukukhulisa usayizi, ukufaka isithombe noma ukukhulisa amawindi emaphethelweni amawindi. Lezi zinkinobho zathathelwa indawo yimenyu ebizwa ngokuthi i-hexagonal noma i-honeycomb evele lapho umsebenzisi echofoza onqenqemeni lwewindi.
Ukusebenzisana komsebenzisi kusebenze ngokuphelele ngokusebenzisa izinkinobho ezihlukile zamagundane emingceleni yewindi kanye nesizinda sedeskithophu, ngenxa yalesi sizathu, ukusetshenziswa kahle kwe-UDE kungenzeka kuphela kusetshenziswa igundane elinezinkinobho ezintathu, ngoba linikeza ukusekelwa kuphela eyisisekelo kakhulu kuzinqamuleli zekhibhodi.
"Umphathi Wewindi Olula Futhi Osebenzayo Wesistimu Ye-X Window".
Iphrojekthi engasebenzi: Umsebenzi wokugcina utholwe eminyakeni engaphezu kwengu-5 edlule.
I-Tipo: Ukubeka phansi.
Inikeze amabha wamatayitela, amawindi amile, izinhlobo ezahlukahlukene zokuphathwa kwezithonjana, imisebenzi ye-macro echazwe ngumsebenzisi, ukugxila kwekhibhodi yokuchofoza kanye nesikhombi, kanye nokubopha izinkinobho ezibekiwe zomsebenzisi nezinkomba.
Kwakwenziwa kaningi ngaphambili njengeklayenti lokugcina elilayishiwe, ukuze kuthi lapho lenziwa ngale ndlela, lapho liphuma, isikhathi somsebenzisi sinqanyulwe.
Ngokuzenzakalelayo, inikeze ngohlelo lokusebenza windows elizungezwe umngcele onebha yesihloko phezulu. Ibha yesihloko ebiqukethe igama lewindi, indawo engunxande ekhombisa ukuthi iwindi lithola okokufaka kwekhibhodi, namabhokisi womsebenzi amathathu aziwa ngokuthi "izinkinobho zebha yesihloko."
Ukucindezela inkinobho kubha yesihloko nomcibisholo obheke phansi kuyo kuveze imenyu eneminye imisebenzi eminingi engasetshenziswa efasiteleni.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe "vtwm"Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi noma lokhu okunye isixhumanisi.
“Umphathi we-Window noMqambi ophelele futhi oqinile owenzelwe njenge-Linux X Server yesimanje, enhle futhi elula, ngakho-ke kulula ukuyakha nokuyigcina. Ngakho-ke, kulindeleke ukuthi izindawo eziqinile zeDeskithophu, ezifana ne-GNOME ne-KDE, zikusebenzise ngokugcwele nangokucacile nangokukodwa esikhathini esizayo esiseduze ".
Inikeza ukuqedwa kwamaqiniso amaningi anzima ukunikeza umsebenzi olula kakhulu. Kusebenza ngokulula ngokwenza isitaki sehluzo. Kungakho-ke futhi futhi elawula nomsebenzi wokwenziwa.
Ingqikithi yayo kuyiprotocol yomqambi ukukhuluma namakhasimende abo kanye nokuqaliswa komtapo wezincwadi we-C waleyo protocol. Umqambi kungaba iseva yokubonisa ezimele esebenza kumadivayisi wokufaka we-Linux kernel ne-evdev, uhlelo lokusebenza lwe-X, noma iklayenti leWayland uqobo.
Ibuye inikeze ukuqaliswa kwesethenjwa kweWeston ngaphakathi kokusebenza kwayo njengomqambi. I-Weston ingasebenza njengeklayenti le-X noma ngaphansi kwe-Linux KMS futhi ithunyelwe namanye amaklayenti wedemo. Umqambi kaWeston umqambi omncane futhi osheshayo futhi ulungele amacala amaningi okusetshenziswa afakiwe futhi ashumekiwe.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- "xwayland" iphakhejiNgakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
"Imenenja yeWindi ebhalwe ngokuphelele ngolimi lokuhlelwa kweGo".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe eminyakeni engaphezu kwengu-2 edlule.
Inakho konke ukuncika kwayo, kusukela ekuxhumaneni no-X kuya ekudwebeni umbhalo kumawindi, kubhalwe kuGo. Futhi, ikakhulukazi i-ICCCM ne-EWMH iyahambisana.
Inezici ezimbili okuthi uma zihlanganisiwe zehlukaniswe kwabanye abaphathi bamawindi: Ukusekelwa kwezinqubomgomo zokubekwa kwamawindi, okuhambisana nama-Wiling we-Tiling and Stacking. Futhi ukusetshenziswa okukodwa kwezindawo zokusebenza ngomqaphi ngamunye, okuvumela umqaphi ngamunye ukuthi abonise indawo yakhe yokusebenza, ezimele kwezinye iziqaphi.
Kuyinto okulungisekayo ngokweqile. Lokhu kufaka ukuxhumanisa inombolo enkulu yemiyalo ekuchofozeni izinkinobho noma ukucindezela kwegundane, ukuhlobisa iwindi, nokusetha izingwegwe ezivuthayo kuye ngesethi yezimo zomdlalo. Konke ukumiswa kwenziwa kusetshenziswa ifomethi yefayela le-INI ngokusekelwa kokufaka okulula okuguqukayo. Akukho ukusetshenziswa kwamafayela weXML, akukho lutho olungabuyiswa kabusha, futhi akukho mibhalo esetshenziswayo.
Ukulanda nokufaka noma eminye imininingwane, okulandelayo kunikwe amandla isixhumanisi.
“Umphathi wamawindi omncane kakhulu weX X Window System".
Iphrojekthi engasebenzi: Umsebenzi wokugcina utholwe cishe eminyakeni engaphezu kwengu-9 edlule.
Inikeze amandla okwenza hambisa amawindi azungeze isikrini, ushintshe usayizi wamawindows ngokuvundlile nangokuqondile, fihla amafasitela, ubuyisele amawindi afihliwe, futhi usule amawindi.
Inikeze ngohlaka oluhle efasiteleni ngalinye eliphethwe, kepha alunikanga ngezithonjana, ukumiswa, amadeskithophu abonakalayo, amamenyu ezimpande anwebekayo, namabha wamathuluzi, phakathi kwezinye izinto.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe "wm2"Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nalezi ezi-5 ezilandelayo «Gestores de Ventanas», ezimele kunoma iyiphi «Entorno de Escritorio»ubizile I-UltimateWM, i-VTWM, iWayland, iWingo, i-WM2, yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-UltimateWM, i-VTWM, i-Wayland, i-Wingo, i-WM2: ama-WM amanye ama-5 we-Linux
Ukukhishwa kweGnome 3.38 sekuvele kumenyezelwe futhi lezi yizindaba zayo